बिमलेन्द्रले भने: मैले सभापतिमा चुनाव लडने निर्णय गरेकोछु, देउवाले जवाफ दिए: मलाई अर्को एक ‘टर्म’ सभापति हुन दिनोस | रुपान्तरण
बिमलेन्द्रले भने: मैले सभापतिमा चुनाव लडने निर्णय गरेकोछु, देउवाले जवाफ दिए: मलाई अर्को एक ‘टर्म’ सभापति हुन दिनोस
नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति बिमलेन्द्र निधिले हिजो बिहिवार सभापति शेरबहादुर देउवासंग भेटी पार्टीको चौधौ महाधिवेशनमा आफू सभापति पदको उम्मेदवार हुने बताएका छन । जवाफमा देउवाले अर्को एक ‘टर्म’ आफू सभापति हुन चाहेको बताएका थिए । जवाफमा निधिले त्यतिबेलासम्म आफू सत्तरी बर्षको भै सक्ने बताउँदै सभापतिलाई आफनो निर्णयमा सहमत हुन अनुरोध गरेका थिए ।
बुढानिलकण्ठ सूत्रहरुका अनुसार, सभापति देउवाले निधिको कुरा शान्त भएर सुनेका थिए । निधिको निर्णयले उनलाई स्तब्ध तुल्याएको थियो । सभापति देउवाले निधिसंग भनेका थिए, चुनाव लडन कार्यकर्तासंग ब्यापक सम्पर्कगर्नु पर्दछ । तपाई अर्को पटक लडे भै हाल्छ नि । म पछि तपाईं नै हो । मेरो अर्को को छ र ?
तर, देउवाको कुराले निधि टसमस भएनन । उनले भने, म तपाईं नेताहरु सबैको सहमतिमा कांग्रेसको सभापति पदमा चुनाव लडन चाहन्छु । यो मेरो निर्णय हो ।
स्मरणीय छ, २०३६ सालमा बीपी कोइरालाले बिमलेन्द्र निधिलाई नेपाल बिद्यार्थी संघको सभापति बनाउनुपर्ने बिचार प्रकट गर्नु भएपछि उनी निर्बिरोध अध्यक्ष बनेका थिए । उनले आठबर्षदेखि अबिच्छिन्न नेपाल बिद्यार्थी संघका अध्यक्ष रहेका देउवालाई बिस्थापित गरेका थिए ।
के यसपटक पनि बिमलेन्द्रले कांग्रेस सभापति पदबाट देउवालाई बिस्थापित गर्लान त ? निश्चय पनि, २०३६ को समय अहिले छैन । न त बीपी कोइराला जस्ता अव्दितिय नेता नै छन । जीवन मूल्य बदलिएको छ । यो स्थितिमा बिमलेन्द्रको बाटो सुगम पक्कै छैन । तर, उनका लागि बाटो त्यति कठिन पनि छैन । पार्टीभित्र र राजनीतिको लोकतान्त्रिक मूलधारमा उनको निरन्तरता छ । उनले सबैसंग समान ब्यबहार गर्दै आएका छन ।
बिमलेन्द्र कांग्रेसभित्र सहमतिको खोजीमा छन । उनले सुदृढ पार्टी निर्माणका लागि सहमतिको आबश्यकता रहेको बताएकाछन । उनी संघीय प्रणाली र समावेशी समाज निर्माणको कार्यसूचीलाई सुदृढ र मजबूत नबनाएसम्म देशको बिकास हुन नसक्ने बताउँछन ।
“अव मधेश बन्नु पर्दछ कांग्रेसको एजेण्डा” बिमलेन्द्र बताउँछन, “पहाडको कठिनाई र आबश्यकता मधेशले बुझनु पर्दछ । मधेशको जटिल समस्या पहाडले बुझनु पर्दछ । यो नै हो हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार ।”
अहिलेको कठिन परिस्थितिमा कांग्रेस सभापति सहमतिका आधारमा चयन हुन सके राम्रोहुने निष्कर्षमा पुगेका छन बिमलेन्द्र । सहमति नभएपनि सहमतिका लागि छलफलहुनु आफैंमा सकारात्मक हो । सहमति निर्माणकै सन्दर्भमा बिमलेन्द्रले केही दिन अघि पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद शशांक कोइरालासंग भेट गरेका थिए । शशांकले धेरै अघिदेखि सभापति पदमा आफनो उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन । त्यतिबेला, प्रफुल्ल मनस्थितिमा रहेका शशांकले बिमलेन्द्रलाई भनेका थिए, “तिमीलाई मेरो पूरा समर्थन छ । बिश्वस्त भएर जाउ । म तिमीलाई पुरा सहयोग गर्छु ।”
यसै क्रममा, बिमलेन्द्रले अर्का कांग्रेस नेता तथा कार्यसमिति सदस्य प्रकाशमान सिंहसंग पनि छलफल गरेका थिए । प्रकाशमान सिंहले पनि सभापतिमा उम्मेदवारहुने आफनो इच्छा सार्वजनिक गरी सकेका छन ।
हाल देउवाका टिममा रहेका अधिकांश साथीहरुसंग छलफलमा रहेका बिमलेन्द्रले केही दिनभित्रै आफनो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने बुझिएको छ ।